हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कं. लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, ३ कात्तिक २०७३)
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले रू. १२ करोड ७९ लाख आम्दानी गरेको छ । कम्पनीकोे असोज १४ मा भएको साधारणसभाले २० प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
आरएसआई : ओभरसोल्ड जोन (२४ दशमलव २७ स्केल)मा छ । विक्री चाप बढेको छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन २३ दशमलव ३४ बिन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेज : २१ दिने औसत मूल्यरेखा र ७ दिने मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । हालको मूल्य ७ दिने रेखा, २१ दिने रेखा र ट्रेण्ड लाइनभन्दा तल रहेको छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. १ हजार ९ सय २१ टेवा पाउन सक्छ । मूल्य महँगिएमा रू. १ हजार ९ सय ९४ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ ।
कम्पनीको आव २०७१/७२ र आव २०७२/७३ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणबीच तुलना
- कम्पनीको अन्तिम त्रैमासमा खुद नाफा ९ दशमलव ७२ प्रतिशतबाट झरेर रू. १२ करोड ७९ लाखमा सीमित भएको छ ।
- जगेडा कोष ८ दशमलव ९४ प्रतिशत बढेर रू. १२ करोड ७४ लाख र बीमा कोष ३३ प्रतिशत बढेर रू. २५ करोड ७३ लाख पुगेको छ ।
- दीर्घकालीन लगानी तथा कर्जा ४१ दशमलव १७ प्रतिशत झरेर रू. ११ करोड ९० लाखमा सीमित भएको छ ।
- आय ६ दशमलव ३१ प्रतिशत बढेर रू. ६१ करोड ८९ लाख पुगेको छ भने व्यय ६ दशमलव २३ प्रतिशत घटेर रू. ४२ करोड ६८ लाखमा सीमित भएको छ ।
- चालू सम्पत्ति कर्जा तथा पेश्कीहरू २० दशमलव ७९ प्रतिशत र चालू दायित्व तथा व्यवस्थाहरू ४४ प्रतिशत घटेको छ ।
- कुल दाबी भुक्तानी सङ्ख्या १० हजार ४८ छ भने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी सङ्ख्या १ हजार २ सय ६६ छ ।
- कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख भएअनुसार आम्दानीका आधारमा प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३९ दशमलव ७५ र पीई रेशियो साढे ३४ गुणा छ । सो आम्दानी र पछिल्लो शेयर मूल्यका आधारमा निकालिएको पीई रेशियो साढे ५६ गुणा छ । हालको शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे ८ गुणा छ ।